रौतहटमा फेरि बाढी – कति जुनिसम्म तराईबासीले डुबान खेपिराख्नु पर्ने हो ! कोशी ब्यारेज ढोकाहरुको साँचो कहिले सम्म भारतलाई जिम्मा लगाई राख्ने हो सरकार ? « Media Club Nepal
९ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:२२
रौतहटमा फेरि बाढी – कति जुनिसम्म तराईबासीले डुबान खेपिराख्नु पर्ने हो ! कोशी ब्यारेज ढोकाहरुको साँचो कहिले सम्म भारतलाई जिम्मा लगाई राख्ने हो सरकार ?
प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:२२
मिडिया क्लब संवाददाता – रौतहट
भारतले लगाएको उच्च बाँध र अग्ला सडकले गर्दा वर्षेनी नेपालको तराई क्षेत्रका धेरै भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेका छन् । असारे विकासका लागि हिमाल, पहाड, तराईका क्षेत्रहरुमा बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपको त्रास बढिरहेको छ ।
यो वर्ष मौसम परिवर्तनमा आएको उत्तरचढावका कारण झनै धेरै बाढी तथा डुबानको त्रासमा जनता बस्नुपरेको छ । गत असार २८ मा आएको बाढीबाट प्रभावित भएको जनजीवन सामान्य हुन नपाउदै फेरी रौतहटमा बाढी आएको छ । पहाडी क्षेत्रमा केही दिनदेखि परेको वर्षाका कारण रौतहटको लालबकैया नदीमा बाढी आएको हो ।
पूर्वमा रहेको बाग्मती नदी अहिले केही सामान्य देखिए पनि लालबकैयामा भने पानीको वहाव उच्च रहेको छ । २८ असारमा आएको बाढीले बाग्मती र लाल बकैया नदीको बाँध विभिन्न स्थानमा फुटाएको थियो । ती बाँध मर्मत हुन नपाउदै दोस्रो पटक आएको बाढीले स्थानीयझनै चिन्तित भएका छन् ।
गौर चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अन्तर्गत सवगढामा रहेको लच्कामा पानीको वहाव निकै तीब्र भएपछि साना सवारी साधनहरुको आवागमन रोकिएको छ । सो स्थानमा नेपाली सेनाले स्थानीयलाई बाटो पार गर्न सहयोग गरिरहेका छन् ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा लगातारका बाढीका कारण स्थानीयको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
लक्ष्मी महिला साकोसले गर्‍यो विश्व वातावरण दिवसमा वृक्षारोपण कार्यक्रम